globalpressonline » Kulmiye oo ka sasay xisbiga Waddani ee abaaraha u gurmaday
Kulmiye oo ka sasay xisbiga Waddani ee abaaraha u gurmaday
Dec 18, 2016 - Comments off
Xukuumada iyo Kulmiye ma waxay noqdeen baqasha aan dhalin ee wixii dhalana ka xanaaqda. Xukuumadu abaarahana wax u qaban mayso cidii xoolahaa iyo dadka wax u qabatana way ka xanaaqaysaa. Siday kaambayn uuga wadayn Berbera iyo Awdal ayaa abaarti xoolihii dhamaysay dadkina diiq ba ku suganyay. Dabeed markuu xisbiga Waddani is xilqaamay ee beesha caalamka ogeysiiyey in gargaar deg-deg ah loo baahanyay ayaa dowladii iyo Kulmiye ba qiiq ka baxayaa oo ay leeyiin maxaa abaaraha loogu gurmanayaa.
Waa xukuumad aan wadanku meel uu marayo ka war hayn oon garan karayn in ay doorashada cod ku waayi doonaan haday faraha la galaan cidii wadanka ka damqanaysa. ilaa hada waxa isla oogsaday Muse Biixi iyo Cali Gurrey oo sidii bahalkii biriijka ka dhacay hambaa-biray goor xisbiga Waddani dowladaha ingiriisa iyo Jarmalku ay abaaraha uuga heleen & 7 million oo pound iyo 5 million oo dollar dabeed waxay uula muuqatay inay dowladu ku fashilantay abaaraha oo sidaa darteed bay isugu buuqsanyiin oo u leeyiin hay’ado aan dowladu ogolaani ma iman karaan. Garan kari maayaan in aan hay’dina dalka imanayan ilaa ay la soo xidhiidhaan safiirka Kenya u fadhiya Somaliland. Xukuumadii iyo Kulmiye talaa ku cadaatay oo waxay ku ceeboobeen gurmadkii abaaraha oo ay kaga mash quuleen kaambayn waana halkay ku dhacayeen xiliga doorashada.
Wasiiru dowlaha arimaha dibada ee dalqada dheerle ee yidhi Gudoomiyaha Waddani waa la xidhi lahaa hadaannu Gudoomiyaha wakiilada ahayan ayaa inagaga filan xanuunka ay xukuumadu ka qaaday weftiga Waddani ee Nairobi ku maqan ee abaaraha u gurmaday. Xukuumada waa ku ceeb in aanay sida xisbiga Waddani aduunka u soo bandhigin xaalada khatarta ah ee abaareed ee dalku ku suganyay. Hadana waa ku ceeb inay ka sasto cidii kale ee hawshaa ay dowladu gabtay wax ka qabanaysa.